Farmaajo oo kulan deg deg ah isugu yeerey madaxda Galmudug [AKHRI]
MUQDISHO - Kadib markii khilaafka u dhexeeya madaxda maamulka Galmudug cirka isku shareerey ayaa qoraal xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya kasoo baxay lagu sheegey inuu kulan deg deg ah la isugu yeerey dhinacyadaan muransan.
Dowlada Federalaka ah ayaa lagu eedeynayaa iney dhinac ka tahay khilaafkaan oo yimid markii madaxda maamulada kulan Kismaayo ka dhacey xiriirka ugu jareen Villa Soomaaliya.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo gudoomiyaha Barlamanka ayaa xilka laga qaadey kadib markii Xildhibanada maamulkaas oo fadhigoodu yahay magaalo madaxda mooshin ka keeneen.
Gudoomiyaha Barlamanka ayaa waxaa isku beel hoose yihiin RW Khayre halka Madaxweyne ku xigeenkaas maamulkaas is xigaan Madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale waxaa booqasho ku jooga xarumaha maamulada xildhibaano ka socda aqalka sare ee Barlamanka Federaalka Soomaaliya kuwasoo xog ururin u jooga deganadaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa horey kulan isugu yeerey maalin kadib markii xiriirka u jareen madaxda maamulada balse arinkaas ayay qaadaceen iyagoo shuruudo ku xirey kulan dhexmara labada dhinac.
Hoos ka akhri Warsaxafadeedka Madaxweyne Farmaajo